दयाहाङ राईको काँधमा फिल्मको चाङ, चल्ला कुन ? « Ramailo छ
दयाहाङ राईको काँधमा फिल्मको चाङ, चल्ला कुन ?
प्रकाशित मिति : Feb 20, 2020
अभिनेता दयाहाङ राई अभिनित फिल्म ‘सेन्टी भाइरस’ यहि शुक्रबार, फागुन ९ गतेदेखि प्रर्दशन हुँदैछ । यो फिल्म रिलिजपछि पनि उनको हातमा फिल्मको चाङ छ ।
दयाहाङलाई लिएर फिल्म बनाउने निर्माता र निर्देशकको लाइन लामै छ । उनी आफ्नो भूमिकालाई न्यायपूर्ण तरिकाले निभाउँछन् । उनीसँग काम गर्न हरेक फिल्मकर्मी सहज महसुस गर्ने भएका हुँदा पनि दयाहाङको हात कहिलै खाली हुँदैन । दयाले केहि महिना अगाडी रेखा थापाको अनटाइटल प्रोजेक्टसाइन गरेका थिए । त्यस लगत्तै उनले दिपेन्द्र लामाको निर्देशनमा बन्ने फिल्म ‘दुई नम्बरी’, सुव्रतराज आचार्यको निर्देशनमा बन्ने फिल्म ‘के घर के डेरा’ र मिलन चाम्सको निर्देशनमा बन्ने फिल्म ‘गोर्खा वारियर’ साइन गरिसकेका छन् ।
दयाको मुख्य भूमिकामा रहेको फिल्म ‘दयारानी’ प्रर्दशनको पर्खाइमा छ । यो फिल्म प्रर्दशन गर्न अनकुल समय नभएको भन्दै दुई तीन पटक सारियो । यस्तै निरफूल पनि प्रदर्शनको उचित मिति पर्खेर बसेको छ । हालसम्म दयाले जति वटा फिल्म साइन गरेका छन्, ती फिल्म केही न केही रुपले आशा गरिएको फिल्म हो ।
दया धेरै फिल्म खेल्ने कलाकारहरु मध्येमा अग्रपंत्तिमा पर्छन् । कुनै मितिमा दयाका दुई फिल्म एकै पटक रिलिज भएका थिए । अर्को साल पनि यस्तै हुने त होइन् ?